Ny fanombohana Danoa dia mamorona atin'akanjo izay tsy mila manasa matetika
Te-hanao akanjo ba mitovy ihany ve ianao mandritra ny herinandro maro? Mandrosoa eo aloha. Ny fanombohana danoà iray antsoina hoe Organic Basics dia nilaza fa ny atin'akanjony dia hijanona ho vaovao mandritra ny herinandro maro amin'ny fitafiana, hanafoanana ny filàna fanasana matetika. Amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny atin'akanjo ataon'izy ireo amin'ny Polygiene, Organics Basics dia milaza fa afaka aleony ...
Firy amin'ireo takelaka fanasan-damba ireo no azonao?
1 Manasa milina 2 Manasa milina (milina fanerena maharitra) 3 Manasa milina (tsingerina malefaka) 4 Manasa tanana 5 Ny mari-pana amin'ny rano mihoatra ny 40C 6 Aza manasa 7 Aza manosotra 8 Manjavona 9 Aza manisy vy 10 Aza mamihina 11 Aza maina madio 12 mitete maina ...
Niseho tamin'ny mari-pamantarana akanjo nandritra ny efa-polo taona izy ireo, tsirairay avy nofinidin'ny manam-pahaizana iraisam-pirenena noho ny fahatsorany sy ny fahazavany. Saingy ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny torolàlana momba ny fanasana dia mety hosoratana amin'ny teny martiana. Raha ny fanadihadiana vaovao dia olona sivy amin'ny 10 no tsy mahay mamantatra ireo marika iraisana ampiasaina amin'ny c ...